In the game "Stalker" has inqwaba yezigaba lapho udinga okuthile ukuthola. Isikhathi esining impela, lawa izinto ezejwayelekile ukuthi kufihlwe kude. Lezi amanothi ngamaketanga, Diaries nezinye izinhlobo amathiphu, okungase ekugcineni ukunquma indawo into eziyifunayo. Nokho, ngeke njalo ngakho baphathe amathiphu - ngokuqiniseka okuphelele singasho ukuthi inhlanhla iphelile, uma ufika imfuno lapho uzodinga ukuthola Oasis. Lena enye yezinhlobo ezingu imisebenzi enzima kakhulu kule game, ngoba awazi akhombise lutho - konke odinga ukukwazi ngokwakho. Kodwa ngisho ukuthi kunzima kakhulu ukukwenza, ngakho uzowathola ukufunda kangcono lesi sihloko, okuzokwenziwa wachaza ngokuningiliziwe, indlela yokuthola isiziba ku "Stalker:. Call of Pripyat"
Uma ufuna ukufunda indlela yokuthola isiziba ku "Stalker: Call of Pripyat" ke ungazama izinhlamvu porassprashivat in the game. Kodwa-ke kufanele wathi ngesikhathi esisodwa - kungcono Saze sadlala ngesikhathi. Zonke ungakwazi ukutshela - kungcono ezihlukahlukene ebezilokhu ngeke ushiya oyokusondeza esabelweni. Nokho, sinake ukuthi abantu basabela njani ngemva ubuyela ukuqedela isigaba. Uma uzama ukutshela umuntu ukuthi namanje bathole oasis ziyaphawuleka, wena umane ngeke ukholwe. Kodwa lokhu akulona ezibalulekile - ebaluleke ngaphezu ukutholakala uqobo, kanye umvuzo ke. Ngakho manje kufanele ugxile ngokuphelele izifundo zendlela yokuthola isiziba ku "Stalker:. Call of Pripyat"
Ungakwazi azulazule eduze Pripyat eside ukuthola ukuthi indlela yokuthola isiziba ku "Stalker: Call of Pripyat", futhi kungenzeka uphumelele. Kodwa kungcono nje ukusebenzisa lesi sihloko futhi ukuya ngqo indawo lapho oasis itholakala. Umgomo wakho - ukumtshela eziyinkimbinkimbi, nje khumbula ukuthi udinga hhayi ngokwayo isakhiwo main kanye uAnnexe elincane elitholakala ngemva kwaso. Kube uzothola ndima encane oholela - ilungela ukulwa neqembu tushkanov ezinkulu esangweni, kanye ngokudubula Inani elincane zombie ngaphakathi. Ngemuva kokuthi ukunqoba izitha, uzoqala esigabeni esisha, okuzoba Maze - bona kugcwele umdlalo "Stalker:. Call of Pripyat" Thola isiziba akulula kangako, kodwa zonke kufanele asebenze.
Ngakho, ngemuva kokudubula wonke Zombies futhi tushkanov ungakwazi ozakwehlela tube, khona-ke balinde isikhathi eside uhamba ngebhayisikili imihubhe. Ungakhathazeki - nabaphikisi yingozi endleleni ungenawo ukuhlangabezana, ngakho ungakwazi nje ukuya ngesibindi umgomo wakhe, uze uzithole ihholo amakholomu. Kungenxa lesi sigaba kubhekwa enye yezinto ezinzima kakhulu umdlalo "Stalker". Kuphi ukuthola isiziba? Kuzodingeka ukuthi zidlule kuleli gumbi ukuze aphumelele, kodwa akulula njengoba kubonakala efika kuqala.
Hall ngaphambi oasis
Eqinisweni, udinga isinyathelo esisodwa kuphela - ngokushesha ngemva kwalokhu Igumbi liyisiphephelo lapho ukhathazwa ngakho. Kodwa okokuqala kudingeka ukubhekana kwenzekani ngaphakathi kuleli gumbi. Ngakho, lapha kukhona pair of amakholomu, phakathi lapho okudingeka badlule ngakhona. Kulokhu, uma uya ngokusebenzisa ambalwa okungalungile, uzobe teleported emuva emnyango. Sikhishwe yokuthi inhlanganisela efanele ngezikhathi elakhiwe, udinga nje ukuqonda isimiso nokuzama kuze ungatholi. ngemuva nje ihholo kuyinto oasis edume. On the egatsheni lesihlahla omkhulu, ungase uthole mshini efanayo ukuthi kudingeka sikhumbule la ukuze afeze umsebenzi. Njengoba masinyane njengoba you thatha ke, uhlasela psy-inja, ufuna ukubulala. Bese kuthunyelwe emuva phezu umvuzo nje. Futhi ungakhohlwa ukuzama ukukhuluma nabanye abantu ngalokho usuthole isiziba - indlela abasabela ngayo kuba ezihlekisayo bagcine.
Njengoba idalwe distributor nokuthi ukuyisebenzisa
Indlela ngibe yindoda ejabulayo: izifundo 10 kusuka uDalai Lama
Amakhowe Frost emhlophe: ubuchwepheshe kanye ezincane wesiginisha
Ifulege kazwelonke yeHungary: incazelo, umlando
Ukuzifihla ngomntwana ngezandla zakhe
Umuthi 'Bifiform "noma" Linex "- ukuthi kungcono ukuthatha ngesikhathi dysbacteriosis?